ISikhululo sikaloliwe saseTianmen iNtaba iSikhululo sikaloliwe iLishui River, iSitalato sabahambi ngeenyawo - I-Airbnb
ISikhululo sikaloliwe saseTianmen iNtaba iSikhululo sikaloliwe iLishui River, iSitalato sabahambi ngeenyawo
Indawo engundoqo: Indlu yam ikwiNdlela iDingtai, kwisiXeko saseZhangjiajie. Iindawo ezijikelezileyo zigqityiwe, kukho iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iivenkile ezithengisa izinto ezikhethekileyo, iivenkile zokutyela, njl.njl malunga ne-100 yeemitha kude noluntu. ndlu, kwaye isikhululo sebhasi Zhangjiajie okufuphi endlwini., yokuthutha kuyinto elula kakhulu. Kukho Tianmenshan Ichibi Inkampani kufutshane, kwaye Huilong Park liphesheya Guanyin Bridge, kwakunye esitratweni ngeenyawo kunye nkolo Tower. kuyinto kuphela 8mins ukuqhuba ukusuka kumbindi wesixeko;
-Umgangatho ogqwesileyo: ukucocwa kobuchwephesha, qinisekisa umthengi omnye endaweni, uyilo loyilo oluzimeleyo, uhlala kwikhaya lobuhle bobomi, ukubonelela ngenkonzo ekhethiweyo, izinto ezilungileyo, zenziwe ngononophelo.
-Inkonzo esondeleyo: umgcini wexesha elizeleyo, unomdla kwaye unokwethenjelwa, inkonzo esondeleyo ye-24h, ukhuseleko kunye nobukrelekrele, ukhuseleko oluphezulu lwe-500,000, ukufakwa kwenkqubo yokhuseleko olukrelekrele.
-Isitayela sokuhombisa: Indlu inendawo enkulu, kwaye umatshini we-mahjong wenzelwe ukuba wonke umntu azonwabisa.Indlu yonke ubukhulu becala inemibala emhlophe kunye nemithi, kunye neenkuni, umqhaphu, ilinen, ukuluka, kunye nezityalo eziluhlaza njengezona zinto ziphambili. ngokusebenzisa umhombiso oluthambileyo. Exuding ukuziva zendalo fresh, sifudumele kunye indawo lethuba ziya kukuvumela okokuba va umoya ethambileyo acwengileyo.
-Umsebenzi wohlobo lweyunithi: amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlala elinye, zombini umsebenzi wekhitshi kunye negumbi lokuhlambela elizimeleyo, ubukhulu becala ukuhlangabezana neemfuno zakho zokuhlala.
Igumbi lokulala: Khetha ngononophelo ibhedi oza kuhambelana nayo, entle kwaye ilungile kwaye ilungile ukuqinisekisa ukulala kwakho kamnandi.
Igumbi lokuhlambela: Iitawuli zokuhlambela, ishampu, ijeli yeshawa, intlama yamazinyo, ikomityi yokuhlamba umlomo, isomisi seenwele, njl.njl. zibonelelwa simahla.
Ikhitshi; ixhotyiswe ngezixhobo zasekhitshini ezisisiseko, ekuvumela ukuba ubonise izakhono zakho, kodwa kufuneka uyigcine icocekile kwaye icocekile emva kokusetyenziswa.
- Decoration style: Le ndlu na isithuba esikhulu, yaye umatshini mahjong yenzelwe ukuzonwabisa wonke Indlu yonke esilawulwa imibala ezimhlophe kunye neenkuni, kunye nemithi, umqhaphu nelinen, ukwaluka, kunye nezityalo eluhlaza njengoko iimpawu eziphambili Exuding.. imvakalelo entsha yendalo, indawo efudumeleyo nekhululekileyo iya kukwenza uzive uthambile kwaye unyulu.
-Umsebenzi wodidi lweyunithi: amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlala elinye, zombini imisebenzi yasekhitshini kunye negumbi lokuhlambela elizimeleyo, ukuhlangabezana neemfuno zakho kubungakanani obukhulu.
Igumbi lokulala: Khetha ngononophelo kwaye utshatise indawo yokulala, entle kwaye inokwakheka okuhle ukuqinisekisa ukulala kwakho kamnandi.
Indawo yokuhlambela: Iitawuli zokuhlambela, ishampu, ijeli yeshawa, intlama yamazinyo, ikomityi yokuhlamba umlomo, isomisi seenwele, njl.njl. zibonelelwa simahla.
Ikhitshi; ixhotyiswe ngezixhobo ezisisiseko ukuze uhambe, kodwa ifuna ukuba uyigcine icocekile ngokwempilo emva kokusetyenziswa.
-Irenti yenyanga yeenyanga ezi-4 nangaphezulu: amanzi, umbane, igesi, ipropathi, i-intanethi, kunye neentlawulo ze-cable TV zixhomekeke kwinto eyenzekayo kwaye ziya kulungiswa ngeshedyuli. Emva kokuba kufakwe umyalelo wenyanga wokurenta, umgcini wendlu uya kusayina isivumelwano kunye nawe kwaye asebenzise iinkcukacha zekhontrakthi.
Inkcubeko yeSithili] Indlu yam ikwiNdlela iDingtai, kwisiXeko saseZhangjiajie. Iindawo ezingqongileyo ezixhasayo zigqityiwe.Kukho iivenkile ezinkulu, iikhemesti, iivenkile ezikhethekileyo, iivenkile zokutyela ezizitulo, njl.njl. malunga ne-100 leemitha kude noluntu. Indlela yentambo yaseTianmenshan ijongene indlu, yaye sisondele Station Bus Zhangjiajie., yokuthutha kuyinto elula kakhulu. Kukho Tianmenshan Ichibi Inkampani kufutshane, kwaye Huilong Park liphesheya Bridge Guanyin, kwakunye esitratweni ngeenyawo kunye nkolo Tower. kuyinto 8mins kuphela qhuba usuka kumbindi wesixeko;